Human Microbiome sy Microbiota
Ecosystems an'ny Ecrobe an'ny Vatana
Ny mikrofiota olombelona dia ahitana ny mikraoba manontolo izay miaina ao anaty vatana. Raha ny marina, dia in-10 ny isan'ny mikraoba mpitsabo ao amin'ny vatana noho ny sela ao amin'ny vatana . Ny fandinihana ny mikrôby ny olombelona dia ahitana mikraoba ary koa ireo karazana mikraoba rehetra ao amin'ny vatana. Ireo mikraoba ireo dia mipetraka any amin'ny toerana samihafa ao amin'ny firafitry ny vatan'olombelona ary manao asa manan-danja izay ilaina amin'ny fandrosoana ara-pahasalamana. Ohatra, mikraoboba tsara dia manome fahafaham-po antsika handevona sy hanangon-tsakafo ireo sakafo avy amin'ny sakafontsika. Ny asan'ny Gene ao amin'ireo mikraoba mahasoa izay manasitrana ny voka- dratsin'ny vatan'ny olombelona sy miaro amin'ny mikraoba mikraoba . Ny fampihenana ny asan'ny mikrôbio dia ny fiantraikany amin'ny aretina otrikaretina maromaro, toy ny diabeta sy fibromyalgia.
Ireo zavamananaina mikrôkôpika izay mitoetra ao amin'ny vatana dia ahitana arika, bakteria, holatra, protists ary viriosy. Ny mikroba dia manomboka manangona ny vatana hatramin'ny fotoana nahaterahana. Ny mikrôbioomin'ny olona iray dia miova amin'ny isa sy ny karazany mandritra ny androm-piainany, miaraka amin'ny isan'ireo karazam-bary mitombo avy amin'ny fahaterahana hatramin'ny olon-dehibe ary mihena amin'ny fahanterana. Ireo mikraoba ireo dia miavaka amin'ny olona tsirairay ary mety hisy fiantraikany amin'ny zavatra sasany, toy ny fanasana tanana na fandraisana antibiotika . Ny bakteria no mikraoba betsaka indrindra ao amin'ny mikrôbioma.
Archaea - prokaryotes tokan-tena izay afaka miaina any amin'ny faritra sasany faran'izay henjana indrindra. Efa noheverina ho bakteria indray izy ireo, saingy hita fa tsy mitovy amin'ny bakteria ao amin'ny rindrin'ny sela sy ny karazana rRNA . Ny arseanina dia afaka hita ao amin'ny tsipaky ny olombelona ary ahitana ny karazana methanogen, izay mitaky ny fepetra oksizenina maimaim-poana mba ho tafavoaka velona.
Bakteria - prokaryotes tokana misy karazany sy endrika samihafa . Ireo mikraoba isan-karazany dia afaka miaina tontolo iainana samihafa ary hita any amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana, ao anatin'izany ny hoditra , ao anatin'ny taratasy mivalona mahasalama , ary ao anatin'ilay taratasy mivalona momba ny fananahana .
Fungi - tsiranoka (dipoavatra) ary karazam-borona maro (holatra) izay misy tsiranoka mipoitra ho an'ny famokarana. Tsy manao photosynthesis izy ireo ; Mamoaka ny fatrany izy ireo amin'ny alàlan'ny fanodinana. Ny vondrom-borona ao amin'ny vatana dia antsoina koa hoe mycobiome. Ny sampana tsy hita maso dia manangona faritra ao amin'ny vatana toy ny hoditra , ny vagy, ary ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinalina.
Mipoitra - Vondrona samihafa amin'ny eukaryotes izay mety ho singa tokana na maro marika. Maro ireo mpihetsiketsika no tsy manana ny toetoetra iombonana fa mifamatotra satria tsy biby , zavamaniry , na fimailo. Ohatra amin'ny protests ny amoebas , paramecia, ary sporozoans. Na dia maro aza ny mpanohitra dia tsy miraharaha ny mpampiantrano azy, ny hafa dia misy amin'ny fiovan'ny toetr'andro (karazana tombontsoa iray tsy manisy ratsy na manampy ny iray hafa) na ny fifandraisana misy eo amin'ny samy izy (samy soa ho an'ny karazany). Mandresy lahatra fa ny ankamaroan'ny olona dia anisan'ny mikrôbôma amin'ny tsipaky ny olombelona, ​​dia ny Blastocystis sy Enteromonas hominis .
Virosy - voka-tsoa misy rongony ( DNA na RNA ) ao anatin'ny proteinina iray antsoina hoe capsid. Virosy maromaro no anisan'ny mikrôbio ny olombelona ary misy virosy izay manindrona ny selan'ny olombelona , viriosy izay mitondra bakteria ( bacteriophages ), ary sampana virjiny izay nampidirina ao amin'ny chromosome . Ny virosin'olombelona dia mitoetra ao amin'ny faritra maro amin'ny vatana, anisan'izany ny taratasy mivalona, ​​vava, trakta ary ny hoditra.
Ny mikrôbiôma olombelona dia ahitana biby mikraoba , toy ny milomano . Ireo arthropods kely kely ireo dia manangona ny hoditra, dia anisan'ny Arachnida , ary mifandray amin'ny spiders.
Ny fampisehoana ny bakteria manodidina ny felam-po dia mihamahia eo amin'ny hoditry ny olombelona. Ny poti-tsakafo dia mitondra ny hatsembohana avy amin'ny hatsembohana amin'ny hoditra. Ny fahatsapana dia manalefaka, manala ny hafanana ary milalao andraikitra lehibe amin'ny fanalefahana ny vatana ary manakana azy tsy hihoatra ny hafanana. Ny bakteria manodidina ny porofo dia manabolize ny zavatra organika miafina ao anaty hatsembohana ao anaty zavatra mampangotraka. Juan Gaertner / Science Photo Library / Getty Images
Ny hoditra hoditra dia mipetraka amin'ny mikrôby maromaro izay miorina eo amin'ny hoditra, ary ao anaty ratra sy volo. Ny hoditra dia mifandray tsy tapaka amin'ny tontolo iainana ivelany ary manompo toy ny fiarovana voalohany amin'ny vatana ho an'ny taovam-pananahana. Ny mikrofiota hoditra dia manampy amin'ny fisorohana ny mikraoba mikitika amin'ny fanjanahana ny hoditra amin'ny fibodoana ny rindrina hoditra. Manampy amin'ny fampiroboroboana ny rafitra fiarovan- tenantsika koa izy ireo amin'ny alàlan'ny fampandrenesana ny sela immune amin'ny fisian'ny pesta sy ny fanombohana valiny. Ny tontolo iainan'ny hoditra dia tena samihafa, amin'ny karazana hoditra isan-karazany, ny haavon'ny asidra, ny mari-pana, ny haavony, ary ny fiparitahan'ny masoandro. Noho izany, ny mikraoba izay mipetraka any amin'ny faritra iray na eo amin'ny hoditra dia tsy mitovy amin'ny mikraoba avy amin'ny mponina amin'ny hoditra. Ohatra, mikraoba mikitoantoana ny faritra izay marefo sy mafana, toy ny eo ambanin'ny toeram-pitrandrahana, dia tsy mitovy amin'ny mikraoba izay manangona ny haingam-pandehan'ny hoditra, hita amin'ny faritra toy ny eo amin'ny sandry sy ny tongotra. Ny mikraoba iraisam-ponenana izay manangona ny hoditra dia ahitana bakteria , virosy , holatra , ary mikraoba biby, toy ny milomano.
Ny bakteria manangona ny hoditra dia miroborobo amin'ny iray amin'ireo karazana karazana hoditra telo: totozy, maina ary maina. Ireo karazam-bakteria lehibe telo izay mipoitra ireo faritra amin'ny hoditra dia Propionibacterium (hita any amin'ny faritra be volkano ), Corynebacterium (hita any amin'ny faritra mafana) ary Staphylococcus (hita any amin'ny faritra maina). Na dia tsy manimba aza ny ankamaroan'ireo karazana ireo, dia mety ho lasa manimba izy ireo amin'ny toe-javatra sasany. Ohatra, ny Espionibacterium acnes dia mipetraka ao amin'ny rindrina maina toy ny tarehy, ny tendany, ary ny aoriana. Rehefa mamokatra diloilo be loatra ny vatana, dia mihamitombo be ny bakteria. Io fitomboana tafahoatra io dia mety hitarika ho amin'ny fampandrosoana ny akne. Ny karazam-bakteria hafa, toy ny Staphylococcus aureus sy ny pyetones Streptococcus , dia mety miteraka olana lehibe. Ny fepetra naterak'ireo bakteria ireo dia ny tsiranoka septicemia sy strep ( S. pyogenes ).
Tsy dia fantatry ny maro momba ny viriosy miompana amin'ny hoditra satria ny fikarohana ao amin'io faritra io dia voafetra hatramin'izao. Ireo virosy dia hita fa miaina eo amin'ny hoditra eo amin'ny hoditra, ao anatin'ny hatsembohana sy ny solika ary amin'ny bakteria hoditra. Ny karazana fungi manangona hoditra dia misy Candida , Malassezia , Cryptocoocus , Debaryomyces, ary Microsporum . Tahaka ny bakteria, ny holatra izay mihamitombo amin'ny tahan'ny tsy fahita firy dia mety hiteraka olana sy aretina. Ny karazana fungi Malassezia dia mety miteraka rongony sy ezema atopika. Biby mikrosopika izay manangom-bolo ny hoditra. Demodex dia mitefatra , ohatra, manangona ny tarehiny ary miaina ao anaty volon'ireo volon'ondry. Izy ireo dia mihinana tsiranoka avy amin'ny solika, sela hoditra, ary na dia amin'ny bakteria hoditra sasany aza.
Sary mikarantsara mikirakira elektronika (SEM) an'ny bakteria Escherichia coli. E. coli dia bakteria boribory Gram-negative izay anisan'ny zavamaniry mahazatra an'ny tsipaky ny olombelona. Steve Gschmeissner / Science Photo Library / Getty Images
Ny mikrôbiôma miparitaka ao amin'ny olombelona dia samy hafa ary manjaka amin'ny bakteria trilona miaraka amin'ny karazana bakteria iray arivo an'arivony. Mamboly mikraoba ao anatin'ny toe-piainana henjana izy ireo ary mandray anjara mavitrika amin'ny sakafo mahasalama, ny metabolisma mahazatra, ary ny fiarovana amin'ny hery fiarovana. Izy ireo dia manampy amin'ny fandefasana ny tsiranoka tsy azo avaozina , ny metabolisma amin'ny asidra sy ny zava-mahadomelina, ary amin'ny fampidirana amina asidra sy vitaminina maro. Misy mikraoba maromaro koa mamokatra antimicrobial sy proteinina amin'ny bakteria . Ny rafitra Gut microbiota dia miavaka amin'ny olona tsirairay ary tsy mitoetra toy izany. Miova izy io amin'ny toe-javatra toy ny taona, fiovan'ny sakafo, fipoahan'ny dioxika ( antibiotika ), ary fiovana ao amin'ny heath. Ny fiovan'ny toetran'ny mikraoba mahazatra dia mifandray amin'ny fampandrosoana aretina azo avy amin'ny gastrointestans, toy ny areti-maso enti-mitondra, aretin'ny sela, ary ny soritr'aretin'ny tsinay. Ny ankamaroan'ny bakteria (manodidina ny 99%) izay mipetraka ao amin'ny tsipika dia tonga avy amin'ny roa phyla: Bacteroidetes sy Firmicutes . Ireto misy karazana bakteria hafa hita ao amin'ny dobo dia ahitana bakteria avy amin'ny phyla Proteobacteria ( Escherichia , Salmonella, Vibrio), Actinobacteria , ary Melainabacteria .
Ny microbiome tsara dia ahitana ny arika, ny holatra ary ny viriosy . Ny archaans be mponina indrindra dia ahitana ny methanogens Methanobrevibacter smithii sy Methanosphaera stadtmanae . Ny karazana fungi izay mipetraka ao amin'ny dobo dia ny Candida , Saccharomyces ary Cladosporium . Ny fiovan'ny fivalozana mahazatra dia mifandray amin'ny fampiroboroboana aretina toy ny aretin'ny Crohn sy ny kolitika mahatsiravina. Ny viriosy be dia be indrindra ao amin'ny mikrôbiôma tsara dia bakteriophages izay manala ny bakteria ho an'ny homamiadana.
Sary mikarantsara mikirakira elektronika (SEM) mikararana amin'ny solaitra (mavokely) amin'ny nify. Ny plaque dia ahitana sarimihetsika bakteria tafiditra ao anaty fitiliana glycoproteine. Ny molia dia miforona amin'ny sekretera sy ny salohy bakteria. Steve Gschmeissner / Science Photo Library / Getty Images
Mikrobiota amin'ny laharana am-bava ao amin'ny tapitrisa ary ahitana arika , bakteria , holatra , protists ary viriosy . Ireo organismes ireo dia miara-miasa ary ny ankamaroany dia mifandray amin'ny mpampiantrano, izay ahitana ny mikraoba sy ny mpampiantrano mandray soa avy amin'ny fifandraisana. Na dia mikarama mikraoba aza ny ankamaroan'ny mikraoba , manakana ny mikraoboba tsy manimba ny vava, ny sasany dia fantatra fa lasa aretina ho setrin'ny fiovan'ny tontolo iainana. Ny bakteria no maro amin'ireo mikrôba am-bava ary ahitana ny Streptococcus , Actinomyces , Lactobacterium , Staphylococcus , ary Propionibacterium . Ny bakteria dia miaro ny tenany amin'ny toe-javatra mampihetsi-po ao am-bava amin'ny alalan'ny famokarana vovobony antsoina hoe biofilm. Ny biofilm dia miaro ny bakteria avy amin'ny antibiotika , bakteria hafa, ny zavatra simika, ny biriky nify, ary ny zavatra hafa na zavatra manimba ny mikraoba. Ny bakteria avy amin'ny karazam-bakteria samihafa dia mamolavola tabilao misy tsiranoka , izay mifikitra amin'ny tara-nify ary mety hiteraka korontana nify.
Ny mikraoba mikraoba matetika dia miara-miasa mba ho tombontsoan'ny mikraoba. Ohatra, bakteria sy fungi indraindray dia misy amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny samy hafa izay mety hanimba ny tompona. Ny bakteria Streptococcus mutans sy fungus Candida albicans miasa amin'ny fifangirihana dia miteraka harona mafy, matetika hita any amin'ny lahy sy ny vavy antitra. S. mutans dia mamokatra sela, polysaccharide extracellular (EPS), izay mamela ny bakteria hifikitra amin'ny nifiny. EPS koa dia ampiasain'ny C. albicans mba hamokarana vovoka toy ny molekiolana izay ahafahan'ny fungus mifikitra amin'ny nify sy ny S. mutans . Ireo zavamananaina roa miara-miasa dia mitarika mankany amin'ny famokarana plaque lehibe ary mampitombo ny famokarana ny asidra. Ity asidra ity dia manimba ny endriky ny alikaola, ka miteraka ny nify.
Ny archea hita ao amin'ny mikrôbiosa am-bava dia ahitana ny Methanogens Methanobrevibacter oralis sy Methanobrevibacter smithii . Mandresy lahatra fa monina ao amin'ny lava- bovotra ny Entamoeba gingivalis sy Trichomonas lenax . Ireo mikraobem-pitenenana ireo dia miaro amin'ny bakteria sy ny homamiadan'ny sakafo ary hita amin'ny isa maromaro kokoa amin'ny olona voan'ny aretim-po. Ny viralal am-bohoka indrindra dia ahitana bakteriophages .
Grice, EA, & Segre, JA (2011). Ny microbiome hoditra. Nature Reviews. Mikrobiolojia , 9 (4), 244-253. http://doi.org/10.1038/nrmicro2537
Zou, S., Caler, L., Colombini-Hatch, S., Glynn, S., & Srinivas, P. (2016). Fikarohana momba ny viromalin'olombelona: aiza isika ary inona no manaraka. Microbiome , 4, 32. http://doi.org/10.1186/s40168-016-0177-y
Lukeš, J., Stensvold, CR, Jirků-Pomajbíková, K., & Wegener Parfrey, L. (2015). Tena mahasoa ve sa tsia ny eokaryotes amin'ny tsinay? PLoS Pathogens , 11 (8), e1005039. http://doi.org/10.1371/journal.ppat.1005039
Bull, MJ, & Plummer, NT (2014). Fizarana 1: Ny mikrôbio Human Gut amin'ny fahasalamana sy ny aretina. Fitsaboana manan-danja: Ny Journal of Clinician , 13 (6), 17-22.
Avila, M., Ojcius, DM, & Yilmaz, Ö. (2009). Ny Oral Microbiota: Miaina miaraka amin'ny vahiny mijanona. DNA sy Biology Cell , 28 (8), 405-411. http://doi.org/10.1089/dna.2009.0874
Fikambanana Amerikanina Mikrobiolojia. (2014, 12 Martsa). Bakterium, ekipa holatra hitarika ny faharavan'ny tovovavy amin'ny virosin'ny zazakely. ScienceDaily. Hita tamin'ny 19 Martsa 2012 avy amin'ny www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140312132625.htm
Ny asan'ny sela ra mena
Inona ny Medulla Oblongata?
Best Tutorials amin'ny Internet
Inona no atao hoe cellules neuroglia?
Brainstem: Ny Asa sy ny toerana misy azy
Fihetseham-po anoloana: Hetsika sy Fahamarinana
Anatomy of the brain: Function Cortex Cerebral
Ny havokavoka sy ny rivotra
Ny fiasan'ny neurons sy ny nerve
Ny Anatomy momba ny lokon'ireo ravina sy pilita
10 Fomba Mahaliana Momba ny Fonao
Ny faritra ao Wernicke ao amin'ny atidoha
Ny lalao sy ny simulations
UIC GPA, SAT ary ACT Data
16 Tantara mahatsikaiky momba ny lohataona
Top 10 Top 40 sy Pop Radio stations
NHL voafetra ny fahafahana misafidy malalaka
Iza avy ny rock Climbing Climbing Rubber no Stickiest?
Libra Moon (Transit) - Famirapiratana sy fihetsika
Ireo mpamoron-kira malaza izay nitady fitaovana string
32 Ronald Reagan quotes tokony fantatrao
Revolisiona Amerikana: Banastre Tarleton
Vonoy ny Bouddha?
Tombontsoa amin'ny fitantanana fotoana
Word of the Day - geijutsu
Polonium Facts - Element 84 na Po
Morris College Admissions
Fampidirana momba ny linguistika tantara
Inona no atao hoe transcendentalism?
Manomboka antoko Pagan na Wiccan na Coveno
Toromarika amin'ny famoahana sy fametrahana Visual C ++ 2008 Express Edition
Fanontaniana sy valiny momba ny vahiny
Quantum Numbers sy Electron Orbitals
Tantaran'ny Antoko Demokratika-Repoblika